अमेरिकी शुभकामना, सम्मान र भेटघाट | शहरबाट शब्दहरु
« आमा, आत्मियता र आनन्द
कफी हावर, दाजुको पावर र द टावर »
अमेरिकी शुभकामना, सम्मान र भेटघाट
१९ पुस, २०७१ तद्अनुसार ३ जनवरी, २०१५ (शनिबार) । हिजोको ढिलो सुतेँ । आज ढिला उठेँ । करिब ८ बजेतिर उठेपछि शनिबारको मौका पारेर गोरामरी खाने बानी छ मेरो । बिहानी बजारमा पैदल डुलेर खाजा ल्याएँँ । आज ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा मलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम राखिएको थियो । बिहानैदेखि मन हर्षित नै थियो । त्यसमाथि अमेरिकाका ए हो र ? भन्ने ठेगोबाट जुरेको साइनोका मित्र विष्णुमान प्रधानको नयाँ वर्षको शुभकामना सन्देशले मनलाई थप खुशी बनायो । कार्यक्रममा पुगियो ।
धेरै पुराना परिचित मान्छेसँग साक्षात्कार भयो । साथै, आजै फुर्सद निकालेर सभासद उदय राणासँग केही मिनेट खासखुससमेत भयो । त्यस्तै, सुमेरू गु्रपमा अध्यक्ष भरत महर्जन, सीडीयो नेपालका प्रदिप सिंह, स्वास्थ्य प्रमुख केदारजी, हेमराज, विनोद, उत्तम, मिलन, शंकरआदि करिब एक दर्जनसँग धेरैपछि प्रत्यक्ष भेट भयो । फेरि फर्किने बेलामा भेटिएका सहकारी संघका अध्यक्ष माधव दुलालसँग धेरैपछि आत्मिय संवाद भयो ।
हुनपनि कार्यक्रम हुँदा म नबाहिरिएको करिब दुईमहिना बढी भइसकेको थियो । आजभने मन चंगा भयो । सम्मानित हुने मौका पाइयो । सम्मानपत्रमा लेखिएको थियो, ‘निरन्तर सहयोग गरेको वापतमा यो सम्मानपत्र प्रदान गरिएको हो ।’ सम्मानपत्र लिँदा अनलाइन पत्रिकाकी प्रबन्ध निर्देशक सुनिता बाटाजु र संवाददाता फातिमा बानु साक्षी थिइन् । खुशी लाग्यो । यो सम्मान मेरो र मलाई थिएन । यो सम्मान सम्पूर्ण अनलाइन पत्रिका समूहको थियो । कार्यालय भर्खर आएपछि सबै साथीलाई यसको खुशी साटियो ।
आज अनलाइन पत्रिकाकी वरिष्ठ संवाददाता मन्दिरा सापकोटा अस्ति हाम्रो समाचार बनेकी वृद्धा आमाको उद्धार भएपछिको अवस्था बुझ्न पुशपति पुगेर रिपोर्टिङ गरिन् । उनीपनि निकै खुशी मनले फर्किइन । आमालाई सफासुग्घर पारी राम्रौ साडीमा सजाएर राखेको बताइन् । ती आमाको ’boutमा मसँग प्रत्यक्ष बुझिरहेका प्रविण न्यान्छौं र रोशनी दिदीलाई यही लिखित शब्दबाट धन्यवाद भन्न चाहन्छु । यहाँले सूचना दिएर हामीलाई सहयोग नगरेको भए, आज अनलाइन पत्रिकाले यसको श्रेय लिने नै थिएन । फेरि हाम्रो पेशागत धर्म पनि यही हो । यसलाई पालना गरेको मात्र हो ।
बेलुका केही समय अनलाइन पत्रिकाकर्मी मन्दिरा, फातिमा र भवानी दुलालसँग छलफल भयो । दिन सबैको राम्रै बितेको प्रतिक्रिया प्राप्त भयो । अनलाइन पत्रिका डटकमको कमाण्डर शिवजी भोली साप्ताहिक बिदा मनाउन आफ्नो जन्मस्थानतिर लागे । आज टेलिभिजनका केही नयाँ साथीहरूसँग कसिलो सम्बन्धको विकास भयो । यस्तै यस्तैमा आजको दिन समापन भयो ।
This entry was posted on जनवरी 3, 2015 at 12:08 अपराह्न and is filed under दैनिकी. You can subscribe via RSS 2.0 feed to this post's comments.	You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.